Wasiirka Maaliyadda oo sheegay in la kordhinayo canshuurraadka Badda iyo Barriga
April 16, 2012 Markacadeey
Wasaaradda Maalliyadda iyo lacagta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bilowday hirgelinta qorshe lagu kordhinayo Canshuurraha Badda iyo Barriga taasi oo qeyb ka ah qorshe ay Wasaaraddu u dejisay kobcinta Dakhliga soo gala Dowladda.
Wasiirka Maaliyadda iyo Lacagta Xukuumadda Soomaaliya mudane C/naasir Maxamed Cabdulle oo shalay ka kulan la qaatay qaar ka mid ah Ganasatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay qorshaha Canshuurraha Badda iyo Barriga ee ay dowladda u dajisay, waxa uuna sheegay in la sameeyay tira koob rasmi ah, si dadka loogu qeybiyo nimaadka Canshuur bixinta.
Sidoo kale wasiirka ayaa xusay in dowladda FKMG ah ay horrey ugu talla gashay in la kordhiyo qaadis canshuurraadka kala duwan, si loo xoojiyo Dakhliga soo galla dowladda iyo guud ahaan dalka, waxa uu carrabka ku adkeeyay in si Cadaallad ah loo qadi doono Canshuurta.
Wasiirka Maaliyadda ayaa tilmaamay in Ganacsatada iyo guud ahaan shacabka looga baahan yahay in ay bixiyaan Canshuurta, isla markaaka at taageerraan dowladdooda, si ay u noqoto dowlad ku tashata Dakhliga dalka ka soo galla oo aan xlli walba gacan shisheeye la suggin.
Dhinaca kale mudane C/naasir Maxamed Cabdulle wasiirka Maaliyadda ayaa soo haddal qaaday lacaggo ay dowladda ugu talla gashay in dalka loo sameeyo, iyo sida ay lacaggahaasi lagu hirgallin karo, waxa uuna sheegay in la daabacay lagactaasi, balse ay ka horreyso in la hello nimaadkii dalka loogu maamulli lahaa.
Maamullada dalka ka jira iyo shacabka Soomaaliyeed ayaan tallooyin ka Uruurrineynaa kaddibna waxaan ku dadaalli doonaa, sidii looga shaqeysiin lahaa,”ayuu yiri wasiirka Maaliyadda, isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan ka shaqeynta Dan guud ee dalka.